Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1422
Andranohinaly Toliara : taksiborosy Sprinter nifandona, olona efatra naratra mafy
Par Taratra sur 16/03/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Olona efatra naratra mafy. Io no vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tao Andranohinaly Toliara, afakomaly hariva. Vokatry ny fandehanana mafy no nahatonga ny loza… Fiara taksiborosy Sprinter roa : ny iray avy any Toliara hihazo aty an-dRenivohitra raha avy aty an-dRenivohitra hidina ho any Toliara kosa ilay faharoa ireto nifandona, afakomaly hariva ireto. Araka ny […]
Par Taratra sur 16/03/2016 En Bref, NS Malagasy
Ny 11 marsa 2016 tamin’ny 7 ora hariva, nahazo vaovao tamin’ny olona iray ny zandary any Belo ambonin’i Tsiribihina fa nisy nibata an-tsokosoko ka nampidirina tao anaty fiara 4×4 ny lakolosy an’ny fiangonana FLM Belo ambonin’i Tsiribihina. Nametraka barazy avy hatrany teo amin’ny lalana fivoahana atao hoe Tsimafana ny zandary tao amin’ny borigady Belo. Tamin’ny […]
Asan-dahalo any atsimo : “Maro ireo zandary maty ka tsy handefitra izahay…”, hoy ny Jly Anthony
Par Taratra sur 16/03/2016 Divers, NS Malagasy
Tonga, omaly ao Mahabo distrikan’i Betroka ireo zandary miisa 75 izay ahitana dokotera ao anatin’ny vondrona manokana miady amin’ny asan-dahalo. “Hanampy amin’ny fampandriana fahalemana any amin’ny faritra atsimo ireto zandary ireto satria efa misy zandary avy amin’ny FIGN mipetraka ary mampandry tany. Misy ny hetsika manokana ataon’ny vondron-tobim-paritra Androy sy Anosy any amin’iny faritra iny. […]
Fiaraha-miasa amin’ny mpamatsy vola : hadinin’ny Vondrona eoropeanina indray ny governemanta
Par Taratra sur 16/03/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Miditra amin’ny fisedrana fahatelo. Hotanterahina any Taolagnaro, ny alalamisy izao indray ny dinika politika sy toekarena iarahana amin’ny mpamatsy vola, amin ‘ny alalan’ny Vondrona eoropeaniona sy ny fitondram-panjakana. Anisan’ny nambaran’ny solontenan’ny UE eto amintsika tamin’ny dinika farany ny novambra teo, fa ratsy sy tsy nahafa-po ny dingana vitantsika. Tsy mandeha ho azy rahateo fa misy […]
Par Taratra sur 16/03/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
« Iri-mahory, ohatra ny zaza maditra ». Entina hilazana zavatra notadiavina mafy ho azo, nefa nony azo mampitondra fahoriana ity ohabolana ity. Tsy dia ny zaza loatra anefa no tiana asian-dresaka eto, fa ny momba ny toetr’andro. Any amin’ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan’ny Nosy any izao, nanomboka omaly ary mety haharitra telo andro, miloko mena, izany […]
Par Taratra sur 16/03/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Voasoroky ny Sampandraharaha miadidy ny fanarahamaso sy ny ady atao amin’ny jiolahim-barotra na ny Service de la surveillance et de la lutte contre la contrebande (SSLC), ao amin’ny ladoany Malagasy, ny tetidratsy saika hanondranana antsokosoko zana-tsokatra miisa zato, any ivelany. Olona roa, omaly, no voasambotra, tompon’antoka tamin’izany. Voasambotry ny Douane avy amin’ny Service de […]
Kitra Afrikanina : niara-tonga omaly ny Cnaps sy ny Wydad
Par Taratra sur 15/03/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Tafaverina an-tanindrazana omaly, tamin’ny 3 ora tolakandro, ny ekipan’ny Cnaps Sport. Niara-dalana tamin’izy ireo koa ny klioban’ny Wydad Athletic Club. Raha tsiahivina, avy niatrika ny lalao mandroso, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra ny roa tonta. Fihaonana natao tany Maraoka, ny asabotsy lasa teo. Raha ny tati-baovao, mbola hijanona eto an-drenivohitra […]
Tenisy : tafita i Finaritra
Par Taratra sur 15/03/2016 Divers, NS Malagasy
Manohy ny fahombiazany hatrany ireo katitakely malagasy, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja tenisy, ho an’ny sokajy U14 sy U16 lahy sy vavy. Fihaonana tanterahina atsy Afrika Atsimo. Fantatra izao fa tafita hiatrika ny lalao ampahefa-dalana, amin’ity anio ity, Andriamadison Finaritra, ho an’ny sokajy U14. Omaly, resiny teo amin’ny ampahavalon-dalana, ilay Maraokanina, Hajar […]
Tsy foana fa niova daty. Hotanterahina ato ho ato ny fifaninanana “4H Honda” eo amin’ny motocross. Anisan’ny hifampitana amin’izany ry Ted Boyaval, tompondaka farany, sy ilay Afrikanina Tatsimo, Van Der Westhuizen. Hangotraka ny fihaonana. Raikitra. Somary hiova filamatra ny fifaninanana motocross nampitondraina ny anarana “4H Honda” amin’ity. Araka izany, hotanterahin’ny orinasa Madauto miaraka amin’ireo mpanohana […]
Razafindralambo Jean-Nirina : mitaky ny famerenana ny hasina maha olona
Par Taratra sur 15/03/2016 NS Malagasy, NS-Culture
« Nihavery ny hasina maha olona, eto amintsika, hatramin’ny taona 2008, fotoana nanombohan’ny krizy politika. Ary na miverina amin’ny laoniny aza ny raharaham-pirenena, mbola hita taratra eo amin’ny andavanandrom-piainan’ny mponina ny vokatr’izany… », hoy Razafindralambo Jean-Nirina, tanora mpanakanto mpanao hosodoko. Manoloana izany ary amin’ny maha mpanakanto azy, ny kisarisary avoakan’ny aingam-panahiny no entiny maneho hevitra sy mitaky […]
Sakaraha : any amin’ny 40 km fokontany ny ankamaroan’ny CSB
14 ny isan’ny CSB ao amin’ny kaominina 12 mandrafitra ny distrikan’i Sakaraha. Miorina 20 ka hatramin’ny 40 km miala ny CSB ny fokontany sasany eo anivon’ny 75%-n’ny kaominina. Vokany, tsy mazoto mitondra ny zanany hatao vaksiny ny renim-pianakaviana. Paikady iray ahatrarana ny zaza any ambanivohitra lavitra ny fitetezana isan-trano nefa koa misy lafiny ratsy ihany.Tsy manatona […]
Taona 2016 : hanodina ny fako ho azo ampiasaina ny DHL
Par Taratra sur 15/03/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Efa maty paika ny lamin’asan’ny orinasa DHL amin’ity taona ity. Misongadina amin’izany ny tetikasa fanodidina fako ho azo ampiasaina. Vinan’ny orinasa DHL eto Madagasikara ny hanodina ny fako ho azo ampiasaina amin’ity taona ity. Nambaran’ny talen’ny varotra, Andrianaharison Yves, izany, omaly tetsy amin’ny Ibis Analakely. Hanentana ireo orinasa mpiara-miasa aminy rehetra ity orinasa ity hampahomby […]
Nanomboka ny talata teo, hatramin’ny asabotsy 19 marsa ho avy izao, ny fanamarihana ny Herinandron’ny teny frantsay sy ny frankofonia, atao ao amin’ny Alliance française Antsirabe( Afa). Hetsika ara-kolotsaina samihafa no nomanina hanamarihana azy ity, toy izay niseho tamin’ny tolakandron’ny talata sy alarobia lasa teo. Hita tamin’izany ny fampirantiana sariitatra na” bande dessinée (BD)”, sanganasan’i Geneviève […]
Herinandron’ny vola : beazina ny ankizy sy ny tanora hahay hitantam-bola
Par Taratra sur 15/03/2016 Economie, NS Malagasy
Sambany eto Madagasikara, mandray anjara amin’ny fankalazana ny herinandron‘ny vola maneran-tany na « Global money week », nanomboka omaly 14 hatramin’ny 20 marsa. Lohahevi-dehibe mahakasika izany, ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora hahay hitantam-bola. Ampitaina amin’ny ankizy sy ny tanora ny tokony hahazaina mitantam-bola : ny fampiasana azy, fitahirizana, fampisamborana, fiantohana. « Fahaizana mampiasa vola tsy tokony ho […]
Fanampiana avy amin’ny fanjakana : mila tsara tantana ny Jirama, hoy ny FMI
Tsy tapaka hatramin’izao ny fanampian’ny fanjakana ny Jirama. Notsiahivin’ny tale jeneralin’ny Tahirimbolam-panjakana, Feno Jean-Pierre, izany omaly, teo Anosy, nandritra ny fanokafana ny herinandron’ny vola maneran-tany. Araka ny tetibolam-panjakana 2016, 240 miliara Ar ny fanampian’ny fanjakana ny Jirama, raha nasiam-panitsiana izany, tafakatra 340 miliara Ar, manatombo 30 miliara Ar raha oharina tamin’ny 2015 ( nisy 310 […]
Nitombo ny faritra nametrahana ny fe-potoam-panjonoana any amin’ny fari-dranomasina Ambodivahibe Antsiranana II. Na izany aza nisy maty tsy nahatanty ny ranomamy mivoaka eny an-dranomasina ny horita, vokatry ny oram-be. Nisokatra ny 9 marsa sy ny 10 marsa teo ny fotoam-panjonoana horita any amin’ny fari-dranomasina arovana Ambodivahibe Antsiranana II. Nakatona ny fiandohan’ny volana desambra 2015 ny […]
Dian’ny FMI : nahitana fihatsarana ny toekarena eto Madagasikara
Nanomboka ny 2 marsa, vita ny faran’ny herinandro lasa teo ny dian’ireo delegasiona avy amin’ny FMI, notarihin’i Marshall Mills. Nanaovan’izy ireo tombanezaka tamin’izany ny fampiharan’ny fitondram-panjakana malagasy ny politika vaovao ara-toekarena nofaritana tamin’ny taon-dasa. Nahitana fihatsarana ny toekarena eto Madagasikara, mitarika fahatokisan’ireo mpanohana avy any ivelany, araka ny fehin-kevitra nambaran’ireo vahiny ireo. Miankina betsaka amin’izany […]
An-kitsim-po : fifampifehezana ifotony
Manana morontsiraka manodidina ny 5.000 km i Madagasikara. Velon-tenan’ny mponina amin’ireny faritra ireny ny harena an-dranomasina eo aminy. Manomboka mahatsapa ny maro amin’izy ireo, ankehitriny, fa miantraika amin’ny fiainana ankapoben’izy ireo tokoa ny fiovaovan’ny toetr’andro. Eo koa ny fanjonoana ampiasana fitaovana vaventy ataon’ireo mpanjono avy any amin’ny firenena mandroso sy matanjaka, satria mihena ny tahiry […]
Fifidianana mpikamban’ny HCDDED : tsy manaiky atao fitaovana politika ny firaisamonina sivily
Par Taratra sur 15/03/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Tsy mazava sy mikorontana ny fikarakarana ny fifidianan’ny firaisamonina sivily izay ho mpikamban’ny HCDDED. Misy manao fitaovana politika… “Izay voafidy ho mpikamban’ny Filankevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna na ny Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’état de droit (HCDDED), anisan’ny mifidy izay ho mpikamban’ny […]
Par Taratra sur 15/03/2016 En Bref, NS Malagasy
Nambaran’ny Praiminisitra Ravelonarivo, omaly tany Taolagnaro, amin’ny fanokafana ny fivorian’ny Antenimieran’ny varotra, fa manga ny lanitra eo amin’ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. « Nisy fivoarana hatrany izany amin’izao fahatelo taon’ny nitondran’ny filoha Rajaonarimampianina izao. Efa hioty ny vokatra isika izao », hoy izy. Hanamora ny fanomanana sy ny fifandraisana ny biraom-paritry ny Frankofonia eto Antananarivo, […]
Cram : « Haorina any ifotony ny firenena »
« Rafitra ifotony ny fokontany ka tokony ho voafidim-bahoaka ny filohany sy ny lefiny ary ireo mpikambana ao amin’ny filankevitry ny fokontany », hoy ny fanambaran’ny filohan’ny Sehatra ifanakalozan-kevitra ho amin’ny hoavin’i Madagasikara (Cram), Harison Marie René, omaly. Nambarany ho anton’ny tsy fahamarinan-toeran’ny fiaraha-monina ireo olom-boatendry ka miteraka tsy fandraisana andraikitra. « Mihena ny fampidiran-ketra, manjaka ny tsy […]
Toeram-pivarotana voatafika : olona 7 indray naratra voatifitra
Nitrangana fanafihana mahery vaika tany Bejofo Ambatondrazaka ny zoma lasa teo, tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany alina. Toeram-pivarotana iray voatafika tamin’izany. Tsy vitan’ny fanafihana ihany anefa, fa mbola nampiasa herisetra ireo jiolahy enina nirongo basim-borona telo. Nitifitra ireo ka olona fito indray voatifitra tamin’izany, ny efatra no tena voa mafy. Nalefa notsaboina, any […]
Vohitromby Ikalamavony : jiolahy matin’ny fitsaram-bahoaka
Jiolahy roa indray matin’ny fitsaram-bahoaka, ny zoma teo tany Vohitromby Ikalamavony. Avy nanafika ry zalahy ary nifanehatra tamin’ny fokonolona ka izao maty tsy tra-drano izao… Nitrangana halatra entana maromaro tao amina tokantrano iray ao Morafeno Vohitromby Ikalamavony, ny 4 marsa 2016. Fantatry ny fokonolona ao an-toerana ireo efa-dahy tompon’antoka tamin’izany. Tsy vitan’izay fa mbola […]
Mpanohitra ny PLD tarihin-dRabeharisoa Saraha
“Nametraka ny fanambarana maha mpanohitra izahay…”, hoy ny filohan’ny antoko Parti libéral démocrate (PLD), Rabeharisoa Saraha Georget, teny amin’ny minisiteran’ny Atitany, Anosy, omaly, taorian’ny nametrahany ny antontan-taratasy maha mpanohitra azy. Efa nanaovany fametraham-pialana ny antoko Maitso nisy azy teo aloha. Ankehitriny, mametraka ny tenany ao anatin’ny fahaleovantena politika tanteraka ny PLD, ary manamafy fa manohana […]
« Précédent 1 … 1 420 1 421 1 422 1 423 1 424 … 1 489 Suivant »